दूर्जेय चेतना: निरपेक्ष अबस्थामा मेरो कलम
Browse » Home » विचार » निरपेक्ष अबस्थामा मेरो कलम
निरपेक्ष अबस्थामा मेरो कलम
भीर पाँखामा दाउरा घास गर्दा , जब यो कलम गीतहरुमा कबिताहरुमा आफूलाई बयक्त गर्थ्यो। कयौ पटक शान्त भएर मेरो मनको कुराहरुको लामो माला बनाएर मलाई दिन्थ्यो। शायद त्यसैले होला मेरो कलमलाई वा भनु भावनालाई सबैले माया गर्थे।हरेक प्रशंशाको शब्द सगै मेरो कलम शान्त र भाबुक रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्थ्यो।
तर अचानक यो कलम एकदिन बौलायो शायद एकदमै आक्रोशित भएर ऊफ्रियो। अहिेले सम्मको सालिन्तालाई चिर्दै बढो ऊदेक रुपमा , हिम्श्रक र आक्रोशित शैलीमा उभियो। मैले बुझिन शायद ।तर मेरो अन्तरआत्मालाई राम्रोसँग पढेको छ मेरो कलमले। मनको कुनाबाट अंश अंशबाट एक बिशेष प्रकारको शक्तीको संचार बनायो मलाई त्यस दिन मेरो कलमले। मैले बुज्नै सकिन तर कता कता चेतना बाट आवाज आयो। अब उठ ढिला भयो, अब उठाउ ढिलो भयो , अब मलाई बेस्करी रगडेर छोड ,ढिलो भयो त्यस्तै त्यस्तै ।।।
मलाई आफै भुझ्न समय लाग्यो। मेरो कलमको बेग र आक्रोशित भावनालाई ,बुझ्नेले बुझ्यो। जस्ले बुज्यो त्यसले कलमलाई नै आक्रोश पोख्यो। तर मान्छेको भन्दा, हिंसक जनावरको भन्दा ठुलो र घातक हुदो रहेछ यो चेतनाको आक्रोश वा भनौ भने कलमको आक्रोश। धरै दिन सम्म रहयो यसको रीस, मलाई कता कता डरलाग्यो किनकि यो कलम कता मसंग नै रीसाऊने त हैन। किनकी म मन्छे हु, मान्छे भएर कलम लिएको छु। कता मेरो चेतनाले आत्मसमर्पन गर्ने त हैन,सायद मेरो कलमले मलाई नियाल्दै थियो। म खरो उत्रिय,आफूलाई स्वाभिमानी बनाऊने परिक्षणमा उतिर्ण भए। यो धेरै आगाडिको कुरा थियो..............
..........तर आजकल कलम चलाऊनै मन लाग्दैन। कलमलाई अनेक रुपमा मैले प्रयोग गरे, चांहे शासकको बिरुद्धमा; बारुद भन्दा पनि बिस्फोटक रुपमा होस, चांहे मायालुलाई माया भरिएको प्रेम पत्र लेख्न होस, हरेक रुपमा कलमलाई मैले जाने कै रुपमा चलाए। कतीले थाहापाए वा पाएनन् तर मेरो कलमले थाहापायो।कहिले हिंस रुपमा, उग्रचन्डिको रुपमा कुशासनको बिरुद्धमा थामिनसक्ने प्रबेगमा अगाडि बढ्यो, लाग्थ्यो मेरो कलम एउटा विशाल क्षेप्रआस्त्र हो। मेरो कलम मायालुलाई प्रेम लेख्दा लेख्दै भावुक बनेर कयौ चोटी रोएको पनि छ र आफूलाई प्रेम पत्र, कविता वा कथामा पोखेर जलाम्य पनि भएको छ। मेरो कलमको यो बिबिध, क्रोधी र शान्त रुप सगै धरै समय चुपलागेर बिस्राम गर्यो। कुशासन ढल्यो, जस्ले गर्दा मेरो कलमको क्रोधी रुपको अन्त्य भयो र धरै समय सम्म प्रेमिकाको बिछोडको बियोगमा मेरो कलमले वियोग मनायो होला सायद भित्र भित्रै जो कुरा मलाई थाह नै भएन। आज मेरो कलमले मेरो गोजीमा बस्नै मानेन,मैले सोधे किन?... अनि मन मनै सोचे... कुशासन??? कि फेरि मेरो प्रेमिका??? तर आज भने मेरो कलम शान्त छ तर खुशी छैन, त्यती आक्रोशित पनि छैन र त्यती भाबुक पनि। यो मेरो कलमको तेश्रो रुपहो; अलि अलि आक्रोशित,अलि अलि भाबुक तर बिल्कुल निरपेक्ष अबस्था।।।।
सायद अब फेरि सामाजिक, आर्थिक, बैजानिक, शैक्षिक र अन्य सबै प्रयोगमा चल्ने छ। आवस्यकता अनुसार आफ्नो शालिनता, भाबुकता अनि आक्रोशको प्रयोग गर्ने छ...................दूर्जेय चेतनाको रुपमा.......
Posted by दूर्जेय चेतना at 12:23 AM
2 comments to “निरपेक्ष अबस्थामा मेरो कलम”
निरन्तरताको शुभकामना !!
धन्यबाद। हजुरको उपस्थितीले मेरो हौसला अझ बढेको छ। मेरो ब्लगमा यहाँको अझ बढी सुझाबको आशामा छु।